ANTOKO MPANOHITRA : “Miezaka miseho vahoaka amin’ny fitokanana fotodrafitrasa ny mpitondra”
Tato anatin’ny roa volana dia nifanesisesy ny fitokanana fotodrafitrasa nataon’ny mpitondra fanjakana. 11 août 2017
“Miezaka miseho vahoaka amin’ny alalan’ny fitokanana fotodrafitrasa etsy sy eroa ny mpitondra izay hanomanana sahady ny fifidianana amin’ny 2018”, hoy ny nambaran’i Razafimahefa Herimanana avy amin’ny antoko mpanohitra.
Amin’ny ankapobeny tsy ireo tena laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka velively no mahamaika ny fitondram-panjakana ankehitriny fa ny fisehosehoana amin’ny alalan’ny fanokanana zava-bita. Na hatramin’ireo minisitra mpikambana eo anivon’ny governemanta aza dia samy manao izay ho afany amin’ny fisehosehoana amin’ny fahitalavitra sy mampiseho ny zava-bitany mba hiarovana ny toerany.
Tsikaritra ihany koa izany ao anatin’ny fisian’ireny fandaharan’asa vaovao eo anivon’ny minisitera ireny izay ahitana soritra fa samy mikofokofoka avokoa ireo minisitra amin’ny fanatanterahana ny asany. Ankilany ireo mpikambana avy amin’ny antoko mpanohitra dia manasongadina fa hoentina hambaboana ny vahoaka sy hikarakarana sahady ny fifidianana filoham- pirenena amin’ny taona 2018 no ao ambadik’ireny fitokanana fotodrafitrasa ireny, araka ny fanazavana noentin’i Razafimahefa Herimanana isan’ireo mpanohitra.
Raha hatao ny tombana dia saika ireo mpandraharaha ara-toe-karena no migoka tombotsoa voalohany amin’ny alalan’ireny fotodrafitrasa izay nasesin’ny Filoha notokanana tato anatin’ny roa volana nifanesy izany. Ohatra amin’izany ilay seranam-piaramaniditra nasiam-panavaozana tany Nosy-Be sy Toliara. Ireo mpisehatra amin’ny lafiny fizahantany sy ny mpanondrana entana no migoka tombontsoa voalohany amin’izy ireo. Ny tena maharary ny vahoaka anefa amin’izao dia tsy fandriam-pahalemana izay miantraika aman’aina mihitsy ary mahazo laka tanteraka manerana ny Nosy.
Manoloana ilay fanambarana nataon’ireo tompon’andraikitra ambony avy eo anivon’ny mpitandro filaminana fa raha manome iray dolara isany avy ny olom-pirenena iray dia afaka mividy angidim-by izy ireo hanenjehana dahalo. Nandritra ny fanadihadiana natao dia samy mitsipaka marin-drano izany avokoa ny ankamaroan’ireo voakasika izay nilaza fa “ireo vahoaka efa latsaka anaty fahasahiranana lalina indray ve no asaina hanome vola hividianana angidim-by”.
Mampibaribary ihany koa izany fa maivan-daja ho an’ny fitondrana ny fandriampahalemana izay tena maharary amin’ny vahoaka amin’izao fotoana izao. Tsy misy afatsy ny fikarakarana ny fifidianana no laharam-pahamehana ho an’ny mpitondra amin’izao.